The akụkụ ruru dị ezigbo mkpa n'ihi gị video, otú niile Apple na-enye gị ihe ike ịgbanwe ya. I nwere ike ime nke a na Mac, iPhone na iPad. Usoro ihe omume ị na-aga na-eji bụ iMovie. Ọ dị mfe iji na o nwere nnọọ mma interface. Akụkụ ruru na-ekpebi ndị nkiri akụkụ, otú ị na-ahọrọ nri akụkụ ruru bụ nnọọ mkpa. The iMovie-enye gị a ga-ekwe omume ịgbanwe akụkụ ruru n'ihu gị mbupụ gị video. Nke a dị mkpa mgbe ị na-aga na-egwu a video on ọzọ ihuenyo. Ọ ga-gbanwee otú ọ na-adaba n'ụzọ zuru okè. The elu mkpebi a video nwere, na elu akụkụ ruru na-eji. Na nke a, ibu dị mma.
Part1: Olee otú ịtọ akụkụ ruru ke iMovie on Mac
Part2: Olee otú ịtọ akụkụ ruru ke iMovie on iPhone / iPad
Part3: Olee otú ịtọ akụkụ ruru na windows
1. Ihe mbụ ị ga-eme bụ na-emeghe ma ọ bụ họrọ a oru ngo si Project Library. The video ga-gosiri na Project Nchọgharị. Ugbu a, ị kwesịrị ị pịa File ma họrọ Project Njirimara. Cheta na faịlụ menu ga-egosi na n'elu nke a kọmputa na ihuenyo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a ọhụrụ oru ngo, pịa '' New Project ''.
2. Họrọ nhọrọ ị chọrọ. 16: 9 bụ widescreen na a video ga-wider karịa ka ọ dị elu. Vidio ndị a na-kachasị maka widescreen TV na na kọmputa na ihuenyo. Ọkọlọtọ akụkụ ruru bụ 4: 3. Nke a ga-eme ka square videos. Ha na-kachasị maka square ekara meziri. Na-emekarị okenye meziri achọ a ọkọlọtọ akụkụ ruru. Ma, videos na ọkọlọtọ akụkụ ruru ala mkpebi na ha size bụ nta. Na n'akụkụ nke ọzọ, widescreen videos nwere elu mkpebi ha na-achọ a otutu ohere. Nke a dị mkpa mgbe ị chọrọ ọkụ a video ma ọ bụ nyefee ya.
1. Gaa ntọala. Ị ga-ahụ ọtụtụ dị iche iche nhọrọ. Cheta na ị chọrọ ịgbanwe '' Ngosipụta akụkụ ruru ''. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti mbụ na ọtụtụ ndị ọzọ nhọrọ. Ịhọrọ akụkụ ruru-amasị gị, na-anabata na ị na-eme. Dị ka e hotara na mbụ, 4: 3 bụ ụkpụrụ akụkụ ruru, ji okenye ngwaọrụ. 16: 9 na-eji widescreen ngwaọrụ. Ndị a bụ abụọ, ndị kasị ewu ewu akụkụ ruru. Buru n'uche na ị na-ahọrọ otu n'ime ha bụ mkpebi amamihe.
Ndị kasị mma ọzọ ka IMovie bụ Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ dị mfe iji, o nwere mma interface na ọ bụ nnọọ irè. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe otu akụkụ ruru nke gị video ma ọ bụ a nkiri, nke a bụ ihe kasị mma software maka gị. Wondershare Video Converter Ultimate Awade ugboro 30 ngwa ngwa mkpakọ, mfe na-eji interface na otutu nhọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe akụkụ ruru, ị ga-eso ndị a.
1. Download na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate. Nwụnye usoro na-ewe nanị minit ole na ole. Emeghe gị Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na usoro ihe omume ga-amalite mgbe a sekọnd ole na ole.
2. Pịa na '' Tinye Files ''. Nke a pụtara na ị ga-tinye videos ka Wondershare Video Converter Ultimate. Mgbe ahụ, chọta gị vidiyo na kọmputa gị na pịa oghe. Nke a ga-tinye ha software. I nwekwara ike ịdọrọ na dobe ha ka ha na Wondershare Video Converter Ultimate.
3. Ugbu a, ị nwere otutu visual mmetụta na edit nhọrọ. Kwuru nnọọ, sị, ị nwere ike ime ihe ọ bụla ị chọrọ na gị video. N'akụkụ aka nri ị ga-ahụ akụkụ ruru. Ịhọrọ akụkụ ruru ị chọrọ. Cheta na Standard akụkụ ruru (4: 3) a chọrọ maka okenye ngwaọrụ. Ị ga-achọpụta na nke a, a video nwere square udi. Na n'akụkụ nke ọzọ, 16: 9 bụ wider akụkụ ruru. Ọ na-achọrọ maka ọhụrụ TV na na meziri. Ya mere, ya ka akụkụ nke a video gị mkpa, ahọrọ kwesịrị ekwesị akụkụ ruru. Mgbe ị na-eme, ị nwere ike ọkụ nke video ka DVD. Iji mee otú ahụ, ị ​​kwesịrị ị pịa '' Ọkụ ''. E nwere àgwà nhọrọ. Cheta na elu àgwà oru ngo-achọ ndị ọzọ ohere. Standard àgwà na-abụkarị ndị kasị mma ọzọ.
Format taabụ na-eji maka na-agbanwe agbanwe akụkụ ruru maka kọmputa gị. Ka ihe atụ, 1280x720 mkpebi bụ widescreen (16: 9). Na n'akụkụ nke ọzọ, 640x480 bụ 4: 3. Ọ bụ ala mkpebi na ọ na-eji site okenye smartphones.
4. Ị nwere ike gaa '' Ngwaọrụ '' taabụ ma họrọ ntọala maka gị video. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa a na ngwaọrụ ịchọrọ, na akụkụ ruru ga-agbanwe otú ọ bụ dakọtara na na ngwaọrụ ahụ. Niile ewu ngwaọrụ na-gụnyere (IPhone, iPad na wdg).
Mgbe ị na-eme, pịa '' Save '' na gị video ga-azọpụta. The Wondershare Video Converter Ultimate bụ a nnọọ ngwa ngwa software. Dị ka ị maraworị, e nwere otutu video converters na-nnọọ ngwa ngwa. Ụfọdụ n'ime ha na-achọ dum ụbọchị iji tọghata videos. N'aka nke ọzọ, Wondershare Video Converter Ultimate bụ ngwa ngwa na ya nwere ike mezue ọ bụla oru ngo na a di na nwunye nke nkeji.
Wondershare Video Converter Ultimate Nwekwara ọzọ, oké atụmatụ. Na a usoro, ọ bụ omume na-tọghata videos ka ọ bụla usoro na-adị. Nke a pụtara na ị nwere ike igwu ọkacha mmasị gị videos ọ bụla na ngwaọrụ ị chọrọ. Ị nwere ike enuba media ka a TV. Ọ dị mfe na ọ dịghị achọ a otutu oge. Na-ere ọkụ video ka a DVD bụ ngwa ngwa na mfe ime. Ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata a video, na Wondershare Video Converter Ultimate dị mfe karịa ebi. N'ezie, e nwere otu click download. Nke a pụtara na ọbụna beginners na-enweghị uche na ọrụ nwere ike iji Wondershare Video Converter Ultimate n'enweghị nsogbu. Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ na-agbalị ọzọ edezi nhọrọ, ị ga-mkpa a bit oge karị. Otú ọ dị, mgbe a awa ole na ole nke na-agbalị niile nhọrọ, ị ga-aghọkwa onye ọkachamara. Na njedebe, anyị nwere ike ikwu na Wondershare Video Converter Ultimate bụ otu nke kasị mma omume, n'ihi na video edezi, na ahịa.
> Resource> iMovie> Olee otú ịtọ akụkụ ruru na Mac / iPhone / iPad